Dehumidifier - iSearch
NgoLwesine, ngoJulayi 9, i-2020
Qala ikhemisi impilo izibungu cleaner wezindlu
Abantu abaningi bahlushwa ukungcola komzimba, lapho izibungu zikhona khona. Ngakho-ke, labo abathintekile bese bebheke ngqo izibungu cleaner wezindlu, Kodwa zihle kangakanani lezi, ngaphezu kwalokho konke, zingabe zibopha uthuli esikhwameni? Ngokuqinisekile lokhu kwakukule mvavanyo uma kuhlonishwa futhi abanye abahlanza ukucisha kakade babanjwe yi-Stiftung Warentest ngaphansi kwe-microscope.
1 Ukugcoba ukugcoba kanye nendlela yabo yokusebenza
2 I-vacuum vacuum cleaner ekuhlolweni kwamakhasimende
3 Ezinye izihlungi zokugcoba izidakamizwa uma kuqhathaniswa
4 Ayikho into enhle kakhulu
5 Izindleko ezingabizi
Ukugcoba ukugcoba kanye nendlela yabo yokusebenza
Noma ubani ofunda lesi sikhangiso, empeleni, ucabange ngokuqondile ukuthi abaningi abahlanza izicucu bayasusa izibungu. Ngeshwa, lokhu akunjalo, kodwa lapha ukusebenza kufanele kucatshangelwe. Abahlanzi abavuthiwe abanjalo abahlelwe ngokuhlukile kumashukela avamile, ngenani elincane. I-aite okuthiwa i-mite vacuum cleaner ibophe uthuli kangcono, okungeke lutho lubuyele emoyeni. Kodwa yilapho inkinga ukuthi eziningi zalezi zinhlayiya azitholi ngempela uthuli lendlu. Ngakho-ke, umphumela awukona phezulu kakhulu lapha, ngoba uthuli lendlu futhi ngaleyo ndlela izibungu zikhona emoyeni. Yiqiniso kukhona futhi abahlanzekile abavundile kakhulu, abese bezibiza ngokuthi abahlanza imfucuza. Lapha kokubili amandla okuhlanza akwanele, njengoba nje uthuli lwendlu luyingxenye enkulu esikhwameni. Intengo ayinandaba nalokhu kuhlolwa, kodwa kuphela umphumela. Kodwa-ke, abaningi abahlanza i-vacuum baye bahluleka ukuhlanza, ikakhulukazi labo abazibiza ngokuthi abahlanza izicucu. Lapha kwakukhona uthuli oluningi lendlu olushiywe ngemuva, olumuntu onomsoco osenenkinga. Kodwa yilokho kanye umuntu othintekayo okumelwe anakekele, ukuze umoya ukhululeke ngothuli lwezindlu ngangokunokwenzeka. Kubalulekile futhi ukuthi umhlanzi wokugcoba i-mite ugcina uthuli esikhwameni. Kodwa lapha cishe cishe bonke abahlanza i-vacuum bahle, okuye kwaphumela ekuvivinyweni. Ukufakwa kuphela uthuli lwendlu, kwaba ukugxeka okukhulu lapha. Lapha, ubuso babuketshelwa ihora elilodwa, kodwa ngeshwa ezinye izinsalela zazingekho ngempela. Ngoba lapha kubalulekile ukuthi umhlanzi wokuhlanza umquba uphinde ubambe ama-droite ama-mite, okwamanje othulini lwendlu. Kodwa ncamashi kule ndawo wonke ama-suckers aphansi kakhulu. Kodwa lokhu kuvivinywa kwakungenziwa ngaphansi kwezimo zebhulabhu futhi ngokuvamile akusho lutho ngokuhlolwa kwansuku zonke. Yilokho kanye okwenzile amakhasimende kanyekanye wabelane nakho okuhlangenwe nakho kwabo.
I-vacuum vacuum cleaner ekuhlolweni kwamakhasimende
Yiqiniso, akubona bonke abakhiqizi abangacatshangwa, ngoba kuningi kakhulu. Kodwa ezinye zazo ziye zafakazela ukuthi ziyaphumelela, nakuba kunjalo zingaba abakhiqizi abangaziwa. Ngisho naseStiftung Warentest, lawa mafutha ahlanzekile aphethwe yi-mite ayengenzi kahle. Lezi zihlanganisa i-vacuum cleaner eVerwerk, okwakumangalisa lapha. Uma ncamashi lo mkhiqizi wayehlale enhle kakhulu, eshintshile manje. Ngoba kukhona manje abakhiqizi abenza ukuhlanza okuhlanjululwe kahle futhi abahlanza izicucu zokugcoba, ngaphandle kokuthengwa kwemali mboleko kumele kubhalwe phansi. Kodwa yilokho kanye neVorwerk, ngoba lapha abahlanza i-vacuum bayabiza uma kuqhathaniswa. Kodwa nakhu ezinye izinto ezibalulekile, njengokusingatha kanye nokuyiwona amandla okuthambisa. Khona-ke amakhasimende anemiphumela yawo, njengoba nje umhlanzi wokuhlanza i-mite uhle ngempela kubantu abanenkinga yokugula noma cha. Konke lokhu kwenzekile kungekhona nje ehoreni, kodwa ngokusetshenziswa okujwayelekile. Ngakho-ke, ukuhlolwa okunjalo kungasho ukuthi ngaphezulu, ngoba akukho ukungcola okufakelwayo okusetshenzisiwe lapha. Amakhasimende awakhulumanga nje kuphela kuhlaziyi evamile yokuhlanza izidumbu, kodwa futhi nakwabasehlanini abahlanzekile be-mattress. Kodwa-ke, lokhu kungase kuphuze enye i-upholstery, kodwa ayiyona ihlanzekile. Ngoba kunjalo futhi ngamahlumela wokugcoba ama-mite, angasetshenziselwa ukuphakanyiswa kuphela. Okubalulekile kulo modeli ukuthi lokhu akusikho isikhwama, okumele kube khona isitsha esisodwa kuphela. Lokhu kwamukelwa kahle kakhulu amakhasimende, noma ngabe inani lentengo laliphakeme lapha. Lo mshini wokuhlanza i-Hoover, inkampani eyaziwayo. Lokhu kusho izinga eliphakeme, eliphinde libheke ngokuhlanza umshini wokuhlanza amanzi. Lapha, amakhasimende ayeneliseke kakhulu, ngaphandle kwamakhasimende owodwa. Kusobala ukuthi lokhu kwakuthola umhlanzi wokuhlanza umshini wokuphumula. Yiqiniso, leli khasimende elilodwa alikwazanga ukunikeza isilinganiso esihle. Kodwa-ke, lo mshukela usenayo amaphuzu we-4,9 5, okwakungumphumela omuhle kakhulu. Ikakhulukazi njengoba lokhu kukhululekile ngempela wonke amaphuzu avela othulini lwendlu nezintambo zomzimba, okubaluleke kakhulu kubantu abagulayo. Ngisho noma le mishini yokuhlanza i-mite yayingeyona igesi, ingaqinisekisa ngempela amakhasimende. Lokhu kwakunjalo futhi kumgodla wokungcola, ngoba lapha konke kwakunjalo. Ukuhlanza nakho kulula kakhulu, ngaphandle kokuba uthuli lwendlu luphumile futhi.
Ezinye izihlungi zokugcoba izidakamizwa uma kuqhathaniswa
Kunezihlanzi ezimbili zokuhlanza izandla ezingasetshenziswa njengesihlanzekile sokuvimba ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuhamba ne-telescopic pole, ephethe futhi ngaphandle kwekhwama. Ukwengeza, bobabili abahlanza i-vacuum basebenzela ukukhanya kwe-UV ukubulala kuze kufike ku-99,9% yezibungu. Abahlanza umshini kufanele bawuthathe umhlabathi kahle futhi ngaphezu kwalokho kokubili babe nezihlungi ezikhethekile, ukuze kungabikho lutho olukhishwe emoyeni. Zombili zivela ezinkampanini ezingaziwa futhi zingaphansi kwe-100 Euro. Ku-cleaner vacuum cleaner kusuka kumabhizinisi uBamamaho, ikhasimende lalinelisekile kakhulu, ikakhulukazi ngokukhululeka kokusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, ukuncibilika kwakungcono kakhulu, ngakho konke kwakuhlanzekile. Ngakho-ke, lo mhlanzi wokuhlanza u-mite uthola amaphuzu aphelele we-5. Ku-cleaner vacuum cleaner kusuka ku-Brubaker yenkampani, ikhasimende lalingenelisekile, ikakhulukazi ngenxa yamandla amnandi kakhulu anamathela. Kodwa-ke, lokhu kuphelelwa umuthi okusebenzayo kusebenza ngama-watt kuphela we-800 ngakho-ke kufaneleke kakhulu phansi phansi. Amaphakethe anesitezi esiphakeme ngeke aphinde awenze okuhle. Kodwa leli klayenti elilodwa lalinelisekile kakhulu ngomphumela, ikakhulukazi endaweni ye-upholstery. Enye ikhasimende ayinelisekile ngoba wathola idivayisi engalungile. Yiqiniso, lokhu kubuyela enkampanini.
I-Hoover MBC500UV, I-Ultra Vortex Mattress Cleaner, ...
I-Dyson V6 I-Mattless Bagless & Wireless Vacuum Cleaner ...
Ngakho-ke, ukulinganisa lapha kunalokho kuxubile. Idivaysi ithola amaphuzu we-3,9 5 kuphela, kodwa ayihlangene namandla okuthambisa. Yilokho kanye umphumela wokuhlola kwamakhasimende ngokuvamile kubukeka sengathi, nakuba kuncane ngamadivayisi ashicilelwe. Omunye umhlanzi wokuhlanza umshini ovivinywe uhlolwe yi-Thomas 'Aqua, Dust and Vacuum Cleaner. Kodwa-ke, lo mshukela usubiza kakade kune-200 Euro futhi kufanele ube mnandi ngempela. Ngokuqinisekile lokho kwakube sekuhlolwe ngamakhasimende kanye ncamashi, ngoba ngentengo enjalo lokho okulindeleke kakhulu kakhulu. Le sucker ingasetshenziswa ngamapayipi kanye nesistimu yokuhlunga i-aqua. Ngokufanayo, i-mite vacuum ingasetshenziswa kuphela ukugcoba, kulabo abangafuni njalo ukugeza ama-rugs ngokushesha. Uma kungenjalo, lokhu kuhlanza okuyi-mite ngaphandle kwekhwama, okubalulekile kubantu abaningi namuhla. Noma kunjalo, umkhiqizi akenzi ukukhangisa okuqondile lapha, kungukuhlanza umshini wokuhlanza. Kunalokho, ukhuluma nabanikazi bezilwane, kepha abagulayo abagulayo bathenga lo mfana. Lezi zanelisekile ngomphumela, noma ngabe ukusebenza kunzima kakhulu. Ikakhulukazi isisindo esiphakeme kwakuyisizathu sokuba amaphuzu adonswe. Ngakho-ke, le sucker yathola inani lama-4,3 5 amaphuzu.
Ayikho into enhle kakhulu
Lokho kwakungumphumela wamakhasimende, nakuba kukhona abakhiqizi abaningi okwamanje ababhekene nezifo ezigulayo. Kule nkinga, ukuhlanza okuyi-mite kungahlanzekile okungaphezu kwe-vacuum cleaner evamile. Ngakho-ke, kufanele uqaphele ukusebenza nokuhlunga ngaphambi kokuthenga. Khona-ke kuqinisekisiwe ukuthi i-vacuum cleaner evamile, ehlinzeka ngokusebenza okufanayo. Ngenxa yokuthi abahlanzi be-mite bavame ukuba nezici nokusebenza okungaphezulu kune-vacuum cleaner evamile, kodwa nje babiza imali eningi. Kodwa-ke, kunezihlanzi ezincane zokuhlanza izidakamizwa, okubonakala ukuthi azibi kakhulu kunezimpahla ezibizayo. Yilapho okuhlangenwe nakho kwamakhasimende kungasiza. Yiqiniso, ukuhlolwa ngu-Stiftung Warentest nakho kuyisizo esibalulekile. Noma kunjalo, imikhiqizo yemikhiqizo kuphela ehlolwe lapha, okuyinto evame ukuhlangabezana nakho konke okulindelwe. Ngakho-ke, zikhona izibonelo kuphela lapha, ngaphandle kokukhetha umqobi. Okubalulekile ekuhlanzeni umshini wokukhipha imishini kuyindlela yokusingatha. Kukhona futhi umehluko. Lokhu kwakungenxa yokuthi imbongolo kaTomas yenza okungalungile. Ngoba lokhu kufanele kulandelwe ngokucophelela, ngaphandle kwalokho amanzi ahamba. Lokhu kungaphezu kokucasula, ngoba nje ukuhlanza kufanele kulondoloze lokhu. Okubaluleke kakhulu ngaleso sikhathi, ukuthi umsizi ongenayo isikhwama. Yilokho kanye bonke abahlanzekisi be-mite vacuum ababenzile, kanti omunye angase asebenze ngesikhwama. Kodwa-ke, akekho namakhasimende asetshenzisile isikhwama, ngoba lezi zingakwazi ukukhulula uthuli lwendlu futhi ngaleyo ndlela nazo ziphinde ziphinde zihlasele. Ngakho-ke, i-vacuum evamile yokuhlanza ngaphandle kwesikhwama ingahle isetshenziswe njengendlela yokuhlanza i-mite vacuum. Kodwa-ke, lokhu kufanele kube nesihlungi esihle kakhulu, ngakho-ke akukho uthuli olungasinda. Ngoba yilokho okushiwo lawa maswidi, okuyinto ejwayelekile kakade yokuhlanza igesi. Ngakho-ke, ukhetho luyaqhubeka, nesipho sisekhona ama-mixers suckers, okwenzelwe ngempela abanikazi bezilwane. Kodwa ncamashi lezi zihlangabezane nezidingo ezibekiwe kumhlanzi wokuhlanza umquba.
Lokho kwakungesiwo umbandela kodwa umehluko nje kufanele utholakale. Lo mthelela wabe esitholakala kuphela emalini, ukusebenza bekucishe kube kufane nabo bonke abahlanza izicucu ze-mite. Ngakho-ke, akukho umthengi oncike ekutheni ukuhlanza ukuhlanza okubizayo kuzomele kube ngcono kunokuba lokhu kungabelana. Yiqiniso, ngokuvamile kukhona umehluko emandleni okuthambisa, kanye nokusingatha. Kodwa ngisho namamodeli angabizi angakwazi ukuqhubeka, ngisho noma ayengaphansi kwamandla. Kodwa laba bahlanzekile be-mite bavame ukukhanya kwe-UV, okubekwe ukuthi kuhle kakhulu amakhasimende. Kungakhathaliseki ukuthi yenza okuthile ngokumelene nezibungu kodwa ayikwazanga ukufakazelwa kuloluhlolo. Ngakho-ke abagulayo abagulayo bayaphinde baxhomeke ekuhlangenwe nakho kwamakhasimende noma imibiko embalwa yokuhlolwa. Ngenxa yokuthi akekho ohlambululi we-mite vacuum angaqiniseka ngempela nge-100%. Noma kunjalo, omunye noma amanye ama-suckers angakwazi ukufeza okungenani i-90%, okumele ivumele abantu abaningi abagulayo ukuba baphefumule. Ngakho-ke, kusekhona umthetho lapha, emaphepheni angaphansi, lokho abakulandela kakhulu. Abahlanza amathumba okugcoba, abesebenziselwa ukuhlanza izandla, ngakho-ke babalulekile. Ngoba ikakhulukazi ama-mattresses nama-sofas ahlolwe lapha ngamakhasimende. Kuphela nge-sucker evela kuTomas ngaleso sikhathi kwase kusetshenziswe phansi. Njengoba lokhu kungahle kugcwaliswe ngamanzi. Zonke ezinye izinto zokuhlanza umshini wokugcoba kufanele zisetshenziswe ngokujwayelekile. Uma ngabe idivaysi kaTomas yayingeke ibe yinkimbinkimbi kangaka, ngabe amakhasimende ayengeke ajabule.
Uma uthola izifo ezinambuzane, kufanele uqaphele uhlelo lokuhlunga uma uthenga umshini wokuhlanza. Ngendlela efanayo, i-vacuum cleaner kumele ingabi nesikhwama, njengoba izikhwama zikhulula ngokuphindaphindiwe uthuli emoyeni. Ngakho-ke, akudingeki kube yilapho okuthiwa i-mite vacuum cleaner, kunalokho ingaba yindawo yokuhlanza imishini ehlanza izinwele zezilwane. Lawa angaphansi kwamandla, ngakho-ke ku-wattage kakade kunezinga eliphezulu kakhulu kunalesi simo nabahlanza abavuthiwe. Konke kubo bonke abakhiqizi abaningi baye bamemezela ukuthi banikeza ukuhlanza okukhethekile okuyi-mite vacuum cleaner. Ngeshwa, lezi zinto azikwazanga ngempela ukuqiniseka. Lokhu kungaphezu kokuhawukela abagulayo abanenkinga yokugula uma besenenkinga ngemuva kokugcoba. Kuphela uhlelo oluhle kakhulu lokuhlunga luye lwaqinisekisa futhi, ngoba lokho kwakuvame ubuthakathaka obukhulu. Ngakho akudingeki ukuba ube umhlanzi wokuhlanza umklamo kusuka kumkhiqizi wemikhiqizo, ngoba ngisho nemikhiqizo eshibhile inika ukusebenza okufanayo. Lokhu kuye kwaholela ekuhlolweni kwe-Stiftung Warentest kanye nokuhlolwa kwamakhasimende. Abakhiqizi abaningi ikakhulukazi banikeza umshini wokuhlanza umklamo ngisho nokubiza kakhulu. Khona-ke kukhona imali eyengeziwe eyenziwe ngokungahambi kahle kwabantu. Yiqiniso, ukuqhathaniswa kwentengo kungasiza lapha, ngakho-ke umkhiqizo oshibhile kodwa okwamanje ungatholakala. Isikhathi esincane kufanele ngaso sonke isikhathi kufanele sisetshenziswe ukuze uthole umkhiqizo omuhle futhi ongezansi.
I-CLEANmaxx mite handu vacuum cleaner | Ukuhlanzeka kwe-matress ngamandla e-suction eqinile, kubulala ukukhanya kwe-UV-C ukukhanya | I-300Watt [Ibhubhisa kuze kufike ku-99,9% yazo zonke izibungu]
Zivikele ezibelethweni, amagciwane nama-microbes!
Ukukhanya kwe-UV-C ngokuthembekile kubhubhisa ku-99,9% yazo zonke izibungu
Ukushisa kubalwa inhlawulo yi-UV-C ukukhanya - ngaphandle kwamakhemikhali
Okufanele ukugcoba nokubulala ama-mattress, ama-duvets, imilenze nokuningi
Ukungcola kuyazanyazanyiswa, ubuso bubhalwa ngokukhanya kwe-UV-C futhi kuyasuswa
I-Hoover MBC500UV, i-Ultra Vortex yokuhlanza umatilasi, isibonisi esimhlophe / esibomvu
Isikhwama sesikhwama / uthuli uhlobo lwesitsha se-cyclone esingenalutho
Ubukhulu bukhululiwe (HxWxD) 34 / 26,5 / 18,5 cm
Isikhwama somfudu / uthuli ibhokisi lokugcwalisa isibonakaliso Yebo
I-roller engaxhunyiwe engaxhunyiwe Yebo
Ubude bekhebula (m): 5
Iris Ohyama IC FAC2 semibhede / Hand / Upholstery / izibungu cleaner wezindlu / kumatilasi wezindlu (400 W, Quilt Acashile, 24,5 13 x x 41 cm) isibonisi mhlophe
Ngokunenzuzo. I-cyclone ne-vibration technology yokunciphisa amaphesenti angu-98% ngaphakathi kwe-3 min. Ashintshekayo. Amamodi amathathu okulanda - aphansi, ajwayelekile, aphezulu. Imodi ephezulu isebenza njengomsebenzi oshisayo womoya. Imoya efudumele yenza kube lula ukukhipha i-mattress
Ukusakaza kwe-cyclone. Ubuchwepheshe be-Cyclonic yokuhlanza ama-sofas, amamithabhisi, ama-cushions noma izitebhisi: ukugeleza okuqondile nokujikelezayo emzimbeni wombhobho, ukugeleza okuqondile nokujikelezayo emzimbeni omkhulu
Ukudlidlizela. Ukuthinta ububanzi be-20 cm kuqinisekisa ukuduma kwe-6000 ngomzuzu. Uthuli lwendlu phakathi kwamafayili ludedelwa
Inzwa. Inzwa ezwelayo kakhulu ithola uthuli lwendlu futhi imemezela ukuphelela kokunciphisa ngemibala emithathu yokulawula (obomvu, i-orange, eluhlaza). Impova nemikhaza, okuyinto enzima ukubona nge-iso iso, ungaphumeli inzwa
Kuyasebenziseka. I-vacuum vacuum cleaner (1,6 kg), ikhebula elide (i-4 m), ibhuloho elijikelezayo (ibanga le-90) lokukhishwa okushelelekile kwamakhamoni ngezindawo eziningi ezinamaphiko. Isikhala ukonga. I-vacuum cleaner ithatha indawo encane futhi igxilile. Akukho ukuma okudingekayo
I-CLEANmaxx mite handu vacuum cleaner | I-anti-mite vacuum cleaner enokukhanya kwe-UV-C | Isinyathelo esisodwa sokuhlanza kanye nokubulala amagciwane incl. HEPA lemifanekiso [yekhwalithi ephezulu yepulasitiki] (eluhlaza)
ISOLEZWE - Zivikele emalungeni othuli, amagciwane namagciwane! Ukubumba inzalo - ngaphandle kwamakhemikhali.
UKUPHUMA - ukukhanya kwe-UV-C kubhubhisa ngokuthembekile kufinyelela kuma-99,9% wazo zonke izintwala ezingenawo amakhemikhali noma ezinye izisebenzi zokuhlanza.
I-FLEXIBLE - Ilungele ukufuqa nokukhipha umatilasi omatilasi, ama-duve, imicamelo, amashidi noma yini enye indawo.
I-HYGIENIC - Isihlungi se-HEPA sigcina ngisho nezinhlayiya ezinhle kakhulu ezimisiwe, ezilungele abanenkinga yokungezwani komqondo.
OKUFANELEKILE - Isihlungi se-HEPA esingageza futhi singasasebenzi, Ubukhulu besitsha sothuli Ubukhulu: cishe. 28x34x11 cm. Amandla: 220 V, 50 Hz, 300 W.
IBrandson - vacuum vacuum cleaner 300W - indawo yokuhlanza isikhala se-UV sterilization - isitsha sokungcola i-150 ml - imibhede egadiwe - Izingubo zokugqoka ezifenisha - yokuhlanza indawo yokuhlanza ilungele ukuthambekela
Izintuthwane zidla kuma-dander abantu futhi zikhiqize inani elikhulu lemikhiqizo ye-metabolic. Wonke amakoloni ahlala kumatilasi okulala. Nge-Brandson mite vacuum cleaner ubulala izinambuzane futhi ulawule umthwalo we-allergen egumbini lokulala. Ngenxa yesibani sokunyanzela se-UV-C, ikhanda lokudlidliza namandla amakhulu wokufaka we-300 W. | 303598
Imibhede yokuhlanza yokuhlanza i-UV-C ye-antibacterial UV, ifenisha ephakeme kanye nomatilasi futhi ibulala amagciwane, isikhunta kanye nezindawo ezibucayi ngohlelo lwayo lwe-UV olusebenzayo. Isibani se-UV-C sibhubhisa i-mite DNA futhi sibulala ngaphezu kwe-93%. Amagciwane afana no-E. coli, staphylococci kanye namakhowe asendle abulawa cishe kumaphesenti ama-100
Ikhanda eliqhaqhazelayo le-vacuum cleaner lihlanza izibungu nezinhlayiya ezingcolile ezivela emhlabathini ngamalunga alo bese liwabunca
Isihlungi se-HEPA esisetshenziswe kule divayisi singenye yezinto ezihamba phambili ngoba sinekilasi lokukhuculula uthuli elingena phutha A. Ngaphezu kwezibucayi, lingagcina impova namagciwane. Ukuze ushintshe isihlungi, okufakwayo kumane kudonswe phezulu ezindlini
Amandla esitsha sokungcola: 150 ml | Amandla aphezulu okubamba we-10 kPa (kilopascals). | nges switch sokusebenzisa ukukhanya kwe-UV kanye nokudlidliza ezansi | Isibani se-UV-C esinenzwa yokuphepha: sicisha isibani ngokuzenzakalela lapho idivaysi inyuswa ingaphezulu).
【I-300 W / 10000Pa Inamandla】 Ngokudlidliza ngemijikelezo engu-33000 / umzuzu ne-roller brashi, abahlanza umatilasi bakhipha izibungu, amaseli esikhumba emqamelweni, umatilasi, kusofa, njll. Bese bebabambisa esitsheni esikhulu sothuli se400ml.
【I-Smart 20cm i-Long UV Lamp】 isusa ngempumelelo izibungu, i-allergener, uthuli kumatilasi bese ibona ngokuzenzakalela izinto ngaphakathi kwe-0 kuya ku-5 cm, iyivule noma icime ngokuzenzakalela.
System Isistimu yokuhlunga ye-6-esiteji yokuqothula kanye nokuhlunga kwe-HEPA】 kuthatha izinhlayiya ezinhle zesayizi wama-micros we-0,3 bese kudedelwa umoya omusha — olungele abahlushwa i-allergy.
【I-400ml Vacuum Cleaner kanye ne-4,5m Long Cable】, i-1,65Kg lightweight mite vacuum cleaner nayo ingancela imfucumfucu egcwele yothuli, izinwele zezilwane futhi ifinyelele ekufinyeleleni okwengeziwe ekuhlanzeni.
Njengomkhiqizi, zonke izingcezu zalokhu kuhlanza okukhona zitholakala kithi futhi sijabule ngaso sonke isikhathi ukuphendula noma imiphi imibuzo.
Izicucu zokuhlanza izandla | I-vacress vacuum | Ukuhlunga kwe-HEPA ngaphandle kwezikhwama Ama-watt angama-300 wokutunwa okwenziwe
ISILULEKO SOKUHLEKA KOMILBEN KANYE NESERERGENE: Ngokuhlanza isandla okugcwala ususa ukubonga ukukhanya kwe-UV-C, izibungu, amagciwane, uthuli nempova ngokushesha nangokuthembekile. Kubaluleke kakhulu kubo bonke abothuli lwendlu nabangenayo imbandela yokulimala!
ISITHEMBISO SEBEDS & UPHOLSTERY FURNITURE: Amathumbu, izindandatho, imicamelo nefenisha ebunjiwe konke kungahlanzwa nge-UV Milk Vacuum Cleaner - futhi ngakho-ke zonke izindawo lapho izimbuzane zizizwa zisekhaya.
HYGIENIC CLEANLINESS. Ezigabeni ze-3, i-mite vacuum cleaner ihlanza inhlanzeko: 1. Kuthulula imbuzane nezindunduma. 2. Bulala izibungu namagciwane ngokukhanya kwe-UV-C. 3. Ukuthengiswa kwezimungumungwane nezinhlayiya ezingcolile ezinhle kakhulu
UKUVIKELA OPTIMAL KWABO BONKE ISITOLO: Isihlungi se-HEPA (Isihlungi sokubuyisela esikhundleni se-ASIN B07SYJCG43) kusihlungi se-mite vacuum cleaner futhi sibopha zonke izinhlayiya zothuli nama-allergener, sibavimbele ekubuyeleni emoyeni wekamelo
Isihlungi se-vacuum cleaner mattress vacuum mite mite vacuum cleaner ngokukhanya kwe-UV futhi isihlungi se-hepa sisusa ngempumelelo izibuko zothuli, amabhakede omatilasi, imicamelo, izindwangu zokuhlanza izindwangu, amakhaphethi, imibhede yombhede
✔ Amandla we-430 W we-high suctionation: isivinini esikhulu sokuphefumula kwezindawo ezinothuli ezijulile, ezifihliwe ngaphansi kwezindwangu zikotini futhi zifakwe emabhokisini othuli abonakalayo ngomthamo omkhulu, ukugwema ukungcoliswa kwesibili kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle komsebenzi
Imoto yekhwalithi enhle: Ukuqina okuqinile ngeke kuthathe kuphela uthuli ngaphezulu, kodwa futhi kususe izikali ezifile emzimbeni womuntu, ukudla okuhlala kuzo izibungu nokulawula ngempumelelo ukuzalaniswa kwama-mite
✔ Ukuhlanzeka ngemisebe: Isibani semisebe sinokuphakama okuphezulu futhi kungabhubhisa i-ribonucleic acid ebusweni bamagciwane e-aphid, ukuze ilahlekelwe umsebenzi wayo futhi ifinyelele umphumela wokususa ama-bacterium kanye nezibungu.
✔ Vikela ugesi wamanje: Iphansi liza ngemichilo e-anti-static ukuze lusebenze kahle umthwalo obhede nezingubo, uvimbele ugesi ongashayi mkhuba futhi uhlanze kahle.
✔ 250 ml: Umthamo omkhulu Umzimba omncane namandla amakhulu, ukuhlanza kungathatha ukungcola okuningi futhi kusebenza kahle. Izihlungi ze-HEPA zisebenza kahle ukuhlunga nokugaya ukungcola okunjengothuli, izibungu namagciwane, bese kuhlunga umoya ohlanzekile ukuvikela ukungcoliswa kwesibili.
I-GoOCO yokunakekelwa kwezinsana ezinakekela i-UV-hand-vacuum cleaner, umatilasi / isandla / upholstery / imishini yokuhlanza / yokuhlanza umatilasi, ifenisha ye-vacuum vacuum cleaner kanye ne-floor floor
T Umugqa ophathwayo we-UV vacuum mattress】 Ukuhlanzeka ngeshubhu ye-UV engu-253.7 nm nomoya oshisayo emazingeni okushisa angama-55 ℃ kuqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu ngokumelene nezindawo zothuli zasendlini: isilinganiso se-bug, izimbuzane, i-microorganism nokususwa kwamagciwane kufinyelela cishe ku-99%.
Vib Isivinini esikhulu sokudlidliza】 Ijubane lokudlidliza lifinyelela izikhathi eziyi-8000 / min. Ukudlidliza okuphezulu-imvamisa namandla wamandla okugxoba i-350 W kwenza kube lula ukukhipha izimbuzane zothuli zasendlini nothuli emathendeni, amashidi nakuma-sofa.
Ingxenye Eyisisekelo Yokuhlunga Ingxenye Izicupho zokuhlunga zomoya ezisebenza kahle futhi zisusa ngaphezu kwama-99,9% wezintuli, udoti, impova kanye ne-dandruff ezinqwabelana ezindaweni zezicubu ezincane njengama-0 3 microns.
Design Idizayini ekhompiyutha nelula】 Isicoci se-vacuum sinezikhilogremu ezimbili kuphela futhi isibambo esihle kakhulu, esiphathekayo. Intambo yamandla efanelekayo yokuhlanza umbhede nesofa. Isipho esihle sikaKhisimusi sabazali / unkosikazi / abangane, isifiso nosuku lokuzalwa!
Jabulela impilo enempilo nehlanzekile.】 Ngempumelelo ekususeni izibungu, izimbungulu zombhede, amabhaktheriya, ukuqina kanye nempova. Ilungele omatilasi, amasofa, upholstery, ilineni lombhede, amarobhothi kanye nokhaphethi (akusebenzi njengendawo yokuhlanza evamile). Ilungele abanenkinga yokungezwani komzimba nabanikazi bezilwane ezifuywayo.
Ukuvikeleka kothuli lwe-UV mite vacuum cleaner frequency vibration ephezulu kanye ne-hepa filtration ephatheka kalula nge-sterilization ephezulu kanye nokusebenza kahle kwe-HEPA komatilasi, imicamelo, okosiko, ukhaphethi
Uhlelo lwe-mite lwe-UV clearing mite: Ukungena ngokushesha kwe-253,7 nm, ama-3,0 S asheshayo amarbu, i-8000 h lifespan, 13,4 cm ubude be-UV tube. Ukubhubhisa isakhiwo seseli sezintwala futhi ubulale izibungu. Susa izibungu ngokushesha bese uhlanza ngamalambu e-cathode quartz oshisayo. Amaphesenti angama-80 noma ngaphezulu esilinganiso sokungena angabulala ngokuqondile izibungu, amabhaktheriya ajwayelekile kanye nezinye izinambuzane eziyingozi. Uhlelo lobuhlakani be-anti-UV obuhlakani, ikhanda lomshini likhuphuka ngo-15 ° noma i-fuselage ishiye d
System Isistimu ephezulu yokusika intambo: izikhathi eziyi-7000 / iminithi izinhlamvu ezifihliwe nezinye izinto eziyingozi zabanjwa. Hlanza izingcekeza ezijulile zasendlini, isizulu esiphakeme sokudlidliza + ibhulashi elithambile, inhlanganisela eqinile, izibungu ezifihliwe, uthuli, izinwele, i-dander kanye nokunye ukungcola kumatilasi, izikhala. Izibungu zinamatabernakele okubamba indwangu futhi kusobala kakhulu ukususa izibungu ngezinti ezinetha. 0,12 mm ibhulashi elithambile, okulula ukukususa izibungu, k
System Uhlelo lokuhlunga olungunxantathu: Gwema ukungcoliswa kwesibili, ubambe uthuli ngempumelelo, izibungu nezinye izinto eziyingozi bese uzivalela ebhokisini lothuli. I-01 HEPA yokuhlunga inkomishi yothuli. 02 isiponji. Ama-vents angama-03 eqeda amandla. Ukugwema ukungcoliswa kwesibili, isihlungi se-HEPA esenziwe ngama-microfibers angama-50 we-lamos borosilicate singakwazi ukubamba nokuhlunga izinto ezinobungozi njengama-mites kanye ne-PM2.5 ukugwema ukungcoliswa kwesibili. Ibhokisi elingahlanzwa ngothuli, uhhafu
System Isistimu yokuqothula iSishingishane: ukuphefumula kwezintwala, izinwele ezibandayo, njll. Ngemuva kokubulala izibungu, sebenzisa isithako esinamandla ukumunca izinwele ezibonakalayo, izimbuzizi ezithukile nezingabonakali, ezihlanzekile futhi ezinganakekeli ukwedlula umgodi ojwayelekile. Amandla we-400 W aphezulu, amandla we-10 kPa wokuqina oqinile.
System Uhlelo lokushisa umoya olushisayo: ukufudumeza ngokomzimba ukususa umswakama. Ukuwa komzimba kuyashubisa umnkantsha futhi komile, futhi umoya osuselwa esintanjeni usetshenziselwa ukususa umswakama ngenkathi ususa izibungu, ugcine umbhede womile futhi ucindezela ukukhula kwama-mite.
Isihloko sangaphambiliniIsinkwa sobuchwepheshe
Isihloko esilandelayoAmazinga Igazi ushukela